रोचक « Janata Samachar
नयाँ वर्षको पहिलो रातमै १७ हजार चालक मापसे कारबाहीमा
भारत । राजधानी नयाँ दिल्लीमा नयाँ वर्ष लाग्ने रातमा १७ हजार भन्दा बढीले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाएको पाइएको छ । आइतबार राति मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी
प्रहरीका हाकिमबाटै पुरुष म्यादी प्रहरी बलात्कृत !
भोजपुर । जिल्लाको दक्षिणी रामप्रसाद राई गाउँपालिकास्थित मानेभन्ज्याङ्गमा पुरुषबाटै पुरुष बलात्कृत भएका छन् । ड्युटीमा रहेको समयमा मानेभज्याङ्ग प्रहरी चौकीका इन्चार्ज प्रहरी नायव निरीक्षक ४७ वर्षीय रामबाबु यादवले म्यादी प्रहरीमाथि
कालिकोटमा जनयुद्धकै झल्को दिने गरी ‘विप्लव’ र प्रहरीबीच भिडन्त
अप्सरा विष्ट कालिकोट । कुनै बेला माओवादी जनयुद्धको उद्गम थलो कालिकोटमा शनिबार राति नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच भिडन्त नै भयो । जनयुद्धकै झल्को दिने
अकल्पनीय दुर्घटनाः बिहे भएकै दिन जीप दुर्घटनामा इन्स्पेक्टर दम्पतीको ज्यान गयो, अरू पाँचको पनि मृत्यु
अमरराज पुन रूकुम। सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम खाँदै लगन गाँठो कसेकै दिन मृत्युवरण गर्नुपर्छ भन्ने कल्पना सायदै कसैले गर्न सक्ला । तर, रूकुममा मुटु कमाउने यस्तै भयावह दुर्घटनामा परेर
दलका लागि भोट माग्ने जिम्मा रोबोटलाई !
सुनिल कार्की पाल्पा । पाल्पामा पहिलो पटक रोबोटको माध्यमबाट जनतासँग मत मागिएको छ । नेपाली कांग्रेस प्रचार प्रसार समिति पाल्पाले रोबोटको प्रयोग गरी जनतासँग भोट मागेको हो । कांग्रेसले जिल्लामै
वृद्धको शव बोकेर मलामी गए महिला
दमौली । नेपाली समाजमा महिलाहरुले शव बोक्नुहुँदैन भन्ने परम्परागत मान्यता अझै पनि व्याप्त छ । त्यही कारण महिलाले शव बोकेको अहिलेसम्म सुनिएको छैन भने यस्तो दृश्य विरलै देख्न पाइन्छ ।
एक खिल्ली चुरोटले यसरी लियो मुलायनको ज्यान, काठमाडौँमा टर्यो ठुलो दुर्घटना
मदन ढुंगाना काठमाडौँ । भनिन्छ, एक काँटी सलाईले सारा जंगल सखाप पार्ने क्षमता राख्छ । तर बिहीबार साँझ त्रिपुरेश्वरिस्थत आलम मेकानिकल वर्कसपमा एक खिल्ली चुरोटले खाऊँ खाऊँ लाऊँ लाऊ उमेरका
तपाइँलार्इ थाहा छ ? चीनबारेका यी १३ रोचक कुरा
एजेन्सी । सुपर पावरको बाटो रहेको चीनको कमान एक पटक फेरि सी जिनपिङ्गको हातमा पुगेको छ । सी जिनपिङ्ग विस्तारै विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति बन्ने बाटोमा छन् । आफ्नो देशभित्रै
अचम्मको कुवा, जहाँबाट एलइडी लाइटको जस्तो प्रकाश आउँछ (फोटो फिचर)
एजेन्सी । पोर्चुगलमा एउटा यस्तो कुवा छ जहाँबाट प्रकाश निस्किन्छ । जुन प्रकाश एलइडी लाइटको जस्तो हुन्छ । यद्यपी यो प्रकाश कहाँबाट र कसरी आइरहेको छ भन्ने कुरा अझैसम्म पनि पत्ता
हिजो चुनाव जितिन्, आज खुसी साटिनसक्दै संसार छाडिन्
सप्तरी । सप्तरीमा एकजना जनप्रतिनिधिले जितको खुसीयाली मनाउँदा मनाउँदै संसार छाड्नुपरेको छ । जिल्लाको हनुमाननगर-कंकालिनी नगरपालिका- २ बाट महिला सदस्यमा निर्वाचित ६३ वर्षीया जसोदेवी खत्वेणीको जितको खुसीयाली मनाउँदै गर्दा हृदयाघातले